YouTube ကို Mobile Data သက်သာစွာဖြင့် ဘယ်လို ကြည့်မလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
Google က စွမ်းရည်နိမ့်ပါးတဲ့ စမတ်ဖုန်းများမှာ သွက်လက်လျှင်မြန်စေမယ့် Android Go OS စီမံကိန်းကို ဖန်တီးနေပါတယ်။ YouTube Go ကလည်း အဲဒီ စီမံကိန်းများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် အလွန် နှေးကွေးတဲ့ နေရာများမှာတောင် သူ့ကို အသုံးပြု နိုင်အောင် ဖန်တီးထားပြီး ထစ်ခြင်း မရှိဘဲ ဗီဒီယိုများကို ချောမွတ်စွာ ကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာ မူလ YouTube App မှာလို ရုပ်ရှင်များ၊ သီချင်း များ၊ တီဗီရှိုးများ၊ ဟာသများ၊ ဖက်ရှင်များ၊ ဟင်းချက်နည်း များနဲ့ How To Video များကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုများကို နှစ်သက်တဲ့ အရည်အသွေးဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်၊ ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ကုန်ကျမယ့် ဒေတာ ပမာဏနဲ့ သင့် စမတ်ဖုန်းမှာ နေရာယူမယ့် ဒေတာ ပမာဏကို သင်က စိတ်တိုင်းကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အနီးအနားမှ သူငယ်ချင်းများနဲ့ Bluetooth, WiFi များက တစ်ဆင့် သင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုများကို မျှဝေနိုင်တဲ့အတွက် မိုဘိုင်းဒေတာ ကုန်ကျမှု သက်သာစေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အရွယ်အစားဟာ 9MB သာ ရှိတဲ့အတွက် မူလ YouTube App ထက် စမတ်ဖုန်းမှာ နေရာယူမှု အလွန် နည်းပါးပါတယ်။ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်း မပြုခင်မှာ Preview ကြည့်ရှုနိုင်တာက သူ့ရဲ့ အားသာချက် ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ပထမဆုံး အကြိမ်ဖွင့်ပြီးရင် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်များကို သင့်အား ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ညာဘက်ကနေ ဘယ်ဘက်သို့ လက်ဖြင့် ပွတ်ဆွဲ၍ ကြည့်ရှုပါ။ နောက်ဆုံး စကရင်မှာ Next ကို နှိပ်ပါ။ နောက် အဆင့်မှာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်ပေးပြီး Next ကို နှိပ်ပါ။
နောက် အဆင့်မှာ အသုံးပြုမယ့် သင့်ရဲ့ Gmail အကောင့်ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းထံ ကုဒ်တစ်ခု ပေးပို့မှ ဖြစ်ပြီး သင့် ဖုန်းနံပါတ်ကို အတည်ပြုပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သူ့ကို စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
သူ့ရဲ့ Home Screen မှာ ဗီဒီယိုများကို ပြသပေးထားပါတယ်။ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို နှိ်ပ်ပါ။
ဒါဆိုရင် ဗီဒီယို အရည်အသွေးများနဲ့တကွ ကုန်ကျမယ့် ဒေတာ ပမာဏကို ပြသထားပါတယ်။ ဗီဒီယို အရည်အသွေးကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Play or Download ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Play ပြုလုပ်ရင်တော့ မူလ YouTube App မှာလို ဗီဒီယိုကို Full Screen ဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အောက်ခြေမှ Downloads Tab ထဲကို သွားရင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုများကို ပြသပေးထားပါ တယ်။
သင့်ဖုန်းကနေ ဖျက်ချင်ရင် ဗီဒီယိုရဲ့ ညာဘက်ဘေးမှ ဒေါင်လိုက် အစက်သုံးစက်ကို နှိပ်ပြီး Delete from phone ကို ရွေးပေးပါ။
အနီးအနားမှ သူငယ်ချင်းထံ ဗီဒီယိုကို ပေးပို့ချင်ရင် အပေါ်ထိပ်ဘားမှ မျှားခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး Send ကို နှိပ်ပါ။ သူငယ်ချင်းထံမှ ဗီဒီယိုကို လိုချင်ရင်တော့ Receive ကို နှိပ်ပါ။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် သူငယ်ချင်းကလည်း သူ့ စမတ်ဖုန်းမှ YouTube Go App ကနေ Send or Receive Button များကို နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် Bluetooth , WiFi ဆက်သွယ်မှုများဖြင့် ဗီဒီယိုများကို ပေးပို့ ၊ ရယူပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ဖိုင်အရွယ်အစားမှာ 8MB ရှိပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Android Version ကတော့ ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး မတူညီပါဘူး။
YouTube ကို Mobile Data သကျသာစှာဖွငျ့ ဘယျလို ကွညျ့မလဲ ?
Google က စှမျးရညျနိမျ့ပါးတဲ့ စမတျဖုနျးမြားမှာ သှကျလကျလြှငျမွနျစမေယျ့ Android Go OS စီမံကိနျးကို ဖနျတီးနပေါတယျ။ YouTube Go ကလညျး အဲဒီ စီမံကိနျးမြားထဲမှ တဈခု ဖွဈပါတယျ။ အငျတာနကျ အလှနျ နှေးကှေးတဲ့ နရောမြားမှာတောငျ သူ့ကို အသုံးပွု နိုငျအောငျ ဖနျတီးထားပွီး ထဈခွငျး မရှိဘဲ ဗီဒီယိုမြားကို ခြောမှတျစှာ ကွညျ့နိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့မှာ မူလ YouTube App မှာလို ရုပျရှငျမြား၊ သီခငျြး မြား၊ တီဗီရှိုးမြား၊ ဟာသမြား၊ ဖကျရှငျမြား၊ ဟငျးခကျြနညျး မြားနဲ့ How To Video မြားကို ရှာဖှနေိုငျပါတယျ။ ဗီဒီယိုမြားကို နှဈသကျတဲ့ အရညျအသှေးဖွငျ့ ကွညျ့ရှုနိုငျ၊ ဒေါငျးလုပျပွုလုပျနိုငျတဲ့ ကုနျကမြယျ့ ဒတော ပမာဏနဲ့ သငျ့ စမတျဖုနျးမှာ နရောယူမယျ့ ဒတော ပမာဏကို သငျက စိတျတိုငျးကြ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျပါတယျ။ အနီးအနားမှ သူငယျခငျြးမြားနဲ့ Bluetooth, WiFi မြားက တဈဆငျ့ သငျ ဒေါငျးလုပျလုပျထားတဲ့ ဗီဒီယိုမြားကို မြှဝနေိုငျတဲ့အတှကျ မိုဘိုငျးဒတော ကုနျကမြှု သကျသာစပေါတယျ။ သူ့ရဲ့ အရှယျအစားဟာ 9MB သာ ရှိတဲ့အတှကျ မူလ YouTube App ထကျ စမတျဖုနျးမှာ နရောယူမှု အလှနျ နညျးပါးပါတယျ။ ဗီဒီယိုမြားကို ကွညျ့ရှုခွငျး၊ ဒေါငျးလုပျလုပျခွငျး မပွုခငျမှာ Preview ကွညျ့ရှုနိုငျတာက သူ့ရဲ့ အားသာခကျြ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ကို ပထမဆုံး အကွိမျဖှငျ့ပွီးရငျ ညှနျကွားခကျြအတိုငျးလုပျဆောငျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အရငျဆုံး သူ့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျမြားကို သငျ့အား ပွသပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။ ညာဘကျကနေ ဘယျဘကျသို့ လကျဖွငျ့ ပှတျဆှဲ၍ ကွညျ့ရှုပါ။ နောကျဆုံး စကရငျမှာ Next ကို နှိပျပါ။ နောကျ အဆငျ့မှာ သငျ့ရဲ့ ဖုနျးနံပါတျကို ဖွညျ့ပေးပွီး Next ကို နှိပျပါ။
နောကျ အဆငျ့မှာ အသုံးပွုမယျ့ သငျ့ရဲ့ Gmail အကောငျ့ကို ရှေးခယျြပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ သငျ့ရဲ့ စမတျဖုနျးထံ ကုဒျတဈခု ပေးပို့မှ ဖွဈပွီး သငျ့ ဖုနျးနံပါတျကို အတညျပွုပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ သူ့ကို စတငျ အသုံးပွုနိုငျပါပွီ။
သူ့ရဲ့ Home Screen မှာ ဗီဒီယိုမြားကို ပွသပေးထားပါတယျ။ ဗီဒီယိုတဈခုကို နှိပျပါ။
ဒါဆိုရငျ ဗီဒီယို အရညျအသှေးမြားနဲ့တကှ ကုနျကမြယျ့ ဒတော ပမာဏကို ပွသထားပါတယျ။ ဗီဒီယို အရညျအသှေးကို ရှေးခယျြပေးပါ။ ပွီးရငျ Play or Download ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
Play ပွုလုပျရငျတော့ မူလ YouTube App မှာလို ဗီဒီယိုကို Full Screen ဖွငျ့ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ။
အောကျခွမှေ Downloads Tab ထဲကို သှားရငျ ဒေါငျးလုပျလုပျထားတဲ့ ဗီဒီယိုမြားကို ပွသပေးထားပါ တယျ။
သငျ့ဖုနျးကနေ ဖကျြခငျြရငျ ဗီဒီယိုရဲ့ ညာဘကျဘေးမှ ဒေါငျလိုကျ အစကျသုံးစကျကို နှိပျပွီး Delete from phone ကို ရှေးပေးပါ။
အနီးအနားမှ သူငယျခငျြးထံ ဗီဒီယိုကို ပေးပို့ခငျြရငျ အပျေါထိပျဘားမှ မြှားခလုတျကို နှိပျပွီး Send ကို နှိပျပါ။ သူငယျခငျြးထံမှ ဗီဒီယိုကို လိုခငျြရငျတော့ Receive ကို နှိပျပါ။ အပွနျအလှနျအားဖွငျ့ သူငယျခငျြးကလညျး သူ့ စမတျဖုနျးမှ YouTube Go App ကနေ Send or Receive Button မြားကို နှိပျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါဆိုရငျ Bluetooth , WiFi ဆကျသှယျမှုမြားဖွငျ့ ဗီဒီယိုမြားကို ပေးပို့ ၊ ရယူပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ဖိုငျအရှယျအစားမှာ 8MB ရှိပွီး အသုံးပွုနိုငျတဲ့ Android Version ကတော့ ဖုနျးတဈလုံးနဲ့တဈလုံး မတူညီပါဘူး။